UMZOBI KAKIM KARDASHIAN WOMTSHATO WOBUGCISA UZISA OWAKHE UMGCA - IMPILO ENTLE
Eyona Impilo Entle Umzobi kaKim Kardashian woMtshato woThotho uQalile nje owakhe umgca
Umzobi kaKim Kardashian woMtshato woThotho uQalile nje owakhe umgca
Umhle wobugcisa uxoxa ngengqokelela yakhe entsha kunye nezabelo ukuba yeyiphi imveliso ekufuneka uyenzile ukuze ube yi-weds. UStefanie Keenan / Umxhasi / i-Getty.com
Ukuhlaziywa kwe-Oct 12, 2020 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Yonke into uKim K. enxiba ihamba yintsholongwane kwi-intanethi, kwaye usuku lomtshato wakhe lwenziwe ngendlela eyahlukileyo. Iliso lakhe lokutshaya elingathathi hlangothi kunye ne-liner ekhaliphileyo zigqityiwe ngokugqibeleleyo Isinxibo sakhe somkhono omde esinemikhono emide . Ukuba unethemba lokuhambisa ubukhazikhazi benkwenkwezi kumtshato wakho, sineendaba ezimnandi. Umculi we-makeup womtshato kaKim Kardashian, uMario Dedivanovic, usandula ukwazisa umgca wakhe weemveliso zobuhle. Ingqokelela ibandakanya iiphalethi zamehlo, iincakuba zamehlo kunye nebrashi-zonke ezo zinto uDedivanovic athi zaphuhliswa kugqalwa umculi oqeqeshiweyo. Funda: Baza kukunceda ufezekise iziphumo ezintle ezivela kwinduduzo yekhaya lakho.
'Wonke umntu kufuneka afikelele kwezona fomyula zisemgangathweni ophezulu,' u-Dedivanovic, umseki kunye ne-CEO ye Makeup nguMario , uxelela uKnot. 'NgeMakeup kaMario, ndithathe iindlela zam zokutyikitya ndaziguqula zaba yimveliso efikelelekayo ephefumlelwe ngabo ndibathandayo nendibasebenzisileyo kulo lonke ikhondo lam.' Ungazisebenzisa iimveliso ukuphinda ujonge ukubukeka komtshato kaKim Kardashian, okanye unokuyila kwaye uhambe nembonakalo yakho enombala.
Ukuba unovalo malunga nokwenza ubuhle bakho kwiqela langaphambi komtshato, ukuya kubuncinci okanye umtshato we-COVID, u-Dedivanovic uthi ezi mveliso ziya kujonga (kunye nemvakalelo) njenge-pro eyiyo-konke okufunekayo kukuziqhelanisa. 'Zama ubuchule bakho kunye nokuzilolonga kwangaphambili ukuze ubuchule bakho!' Ingqokelela iyafumaneka ukuthenga kwi Yenza indawo kaMario kwaye ISephora .
Ngubani owenze umtshato kaKim Kardashian?
Jonga le post kwi-Instagram Iposti ekwabelwana ngayo nguKim Kardashian West (@kimkardashian) ngoMeyi 27, 2014 ngexesha 7:58 am PDT
U-Mario Dedivanovic ebesenza i-Kim K's makeup iminyaka eli-12, yiyo loo nto ingamangalisi into yokuba wayiphatha glam yakhe yomtshato. UDedivanovic ligcisa lobugcisa elidumileyo elisebenze nezinye iinkwenkwezi ezininzi, kubandakanya uDemi Lovato, uDanielle Union kunye noAriana Grande. Ukhe wasebenzisana noKim Kardashian ukwenza Iphalethi eyithengisa kakhulu ye-eyeshadow yohlobo lwayo, Ubuhle beKKW . Ukuthathela ingqalelo ukuba basebenze ixesha elingakanani bobabini, uDedivanovic wayengenguye umlinganiso womtshato kaKim Kardashian. Emva kwayo yonke loo nto, ufuna ukuthemba ukuba iprojethi yakho yomtshato iya kukwenza uzive umhle kakhulu kumsitho!
Ukubumba kukaMario Dedivanovic nguMario Line Makeup nguMario
Emva kokuchitha iminyaka efunda ubugcisa bokwenza izithambiso kwaye waba ngomnye wabaculi abadumileyo kwindawo yemiboniso, uDedivanovic wasungula eyakhe uphawu ngobuhle nge-1 ka-Okthobha ka-2020. I-Makeup Ngu-Mario ngumnqa omangalisayo, ojolise ngamehlo okhuthazwe ngamagcisa. (Ukulinganisa kufanelekile wonke umntu unxibe iimaski -Ngakumbi kwimitshato-ngokukhanya kwe-COVID.)
utshintsha njani igama lakho xa utshata
Umgca ubandakanya iiphalethi zamehlo ezithathu: enye ine-matte engathathi hlangothi, enye enesinyithi esimibalabala kunye nenye enesinyithi esenziwe ngombane. I-mogul yobuhle ikwabandakanya imveliso eyahlukileyo, iMaster Metal Manipulator, ukunceda ukutshintsha isinyithi kunye nesinyithi sibe yimigca yamehlo ehla emhlathini. Kwi. Ukongeza, ingqokelela ibandakanya ipro-evunyiweyo evunyiweyo kunye nokuseta ikiti ukuze i-eyeshadow yakho ihlale kulo msitho, ulwamkelo nangaphaya. Umseki kunye ne-CEO bakwaphuhlise iimveliso ezintathu ezongezelelweyo eziza kunceda ukuba-i-weds ibonise ngamehlo abo amahle. Abathengi banokukhetha ipensile ye-eyeliner, ipeni yolwelo eyeliner okanye ipensile yamehlo eqaqambileyo (okanye zontathu) ukwenza ukubukeka okumangalisayo.
Ngaba umnxeba wokugqiba? Ukuqaqamba, ukuqaqambisa okubonisa okudala ukubonwa emehlweni okanye ebusweni. Ukuba uziva usoyika ngenxa yazo zonke ezi mveliso zivunyiweyo, ungakhathazeki. I-Dedivanovic ikwaphuhlise iibrashi ukukunceda ngobuchule ukusebenzisa ii-primers, ii-highlighters kunye neeladadows. (I-Psst: uphinde warekhoda ii-tutorials kwiwebhusayithi yakhe ukunceda abathengi ukuba bafumane okuninzi kwiimveliso.) Emva kokusebenzisa umgca wakhe omtsha, uya kuqengqeleka uye kumaqela akho angaphambi komtshato, ubuncinci okanye umtshato obonakalayo ofana neprojekhthi. Ngapha koko, umgca wakhe ubandakanya ubumnene, i-biodegradable makeup wipes ukukunceda ukuba ususe konke emva kokubhiyozela. Bona ezinye zeemveliso zethu esizithandayo (kwaye uzithenge), ngezantsi.
Makeup nguMario Iphalethi ye-Master Metallics eyeshadow, $ 48, ISephora.com
Makeup nguMario Iphalethi eyeshadow yentsimbi eyintloko, $ 48, ISephora.com
Isinxibo somyeni kumtshato wasehlotyeni ongaphandle
Makeup nguMario Umlawuli we-Master Metal, i- $ 14, ISephora.com
bangaphi abakhaphi emtshatweni
Makeup nguMario I-Master Mattes ekhanyisa ipensile yamehlo, $ 20, ISephora.com
Makeup nguMario I-EF 2 yebrashi yokuhombisa, $ 22, ISephora.com
Makeup nguMario Ukususa i-makeup sula, $ 15, ISephora.com
Umtshato kaKim Kardashian
Jonga le post kwi-Instagram Iposti ekwabelwana ngayo nguKim Kardashian West (@kimkardashian) ngoMeyi 27, 2014 ngexesha 7:50 am PDT
Ukujongwa komtshato kaKim Kardashian kujonge kwintsholongwane ngenxa yokuba kubetha ibhalansi egqibeleleyo yesibindi kunye nenhle. I-Dedivanovic yenze iliso elihle lokungathathi hlangothi kwinkwenkwezi yokwenyani kwaye emva koko yayibonisa ngemizobo, i-eyeliner emnyama kunye nemivimbo emide, yefluttery. Umculi weqonga odumileyo utyhile ngqo ukuba zeziphi iimveliso awayeqhele ukuzenza Ewe! Iindaba (uninzi lwazo lwenziwa kukuBola kweDolophu). Nangona kunjalo, ukuba-weds abafuna ukweba isitayile sikaKim K banokukwenza oko ngoncedo lweemveliso ezintsha zikaDedivanovic.
Lungisa amehlo akho kwaye usebenzise ibrashi enoboya ukuhlamba imibala eyahlukeneyo emdaka ngapha kweenkophe zakho-ugxile kwimibala emnyama ecaleni kwethambo lakho lobuso kunye nekona yakho yangaphandle. Usebenzisa i-eyeliner engamanzi, landela umgca wakho wokuqhuma kwaye ucofe ngaphandle kwaye unyuse isiphumo esimangalisayo samaphiko. Emva koko, uthuli oluqaqambisayo oluqaqambileyo (oluthi nguDedivanovic yinto ekufuneka uyenzile ukuze ube-yi-weds) kwindawo ephezulu yamathambo akho, ngapha kweenkophe zakho nakwiimbombo zangaphakathi zamehlo akho. 'Yenza umbhiyozo omncinci wokudanisa kwiinkophe kunye neefoto ezintle, ezilungele imitshato okanye iminyhadala, utshilo. 'Kulungile nakwiikhola okanye isaphetha sekomityi ukongeza ukubengezela kuyo nayiphi na inkangeleko.' Ukugqiba ngokugoqa imivimbo yakho kunye nokufaka imascara. Jonga kanye le nto uza kuyidinga kuMqokeleli ngokuqokelelwa kukaMario ukuze ususe inkangeleko entle yenkwenkwezi.
igama lokugqibela eliqhelekileyo e-usa
Makeup nguMario Ukulungiselela ukujonga iliso kunye nokuseta, $ 28, ISephora.com
Makeup nguMario Iphalethi ye-Master Mattes eyeshadow, $ 48, ISephora.com
Makeup nguMario I-Master Mattes eyeliner yolwelo, $ 22, ISephora.com
Umama womyeni iingoma zokudanisa
Makeup nguMario I-EF 1 yebrashi yokuhombisa, $ 22, ISephora.com
Makeup nguMario I-Master Crystal Reflector ekhanyayo, $ 24, ISephora.com
Iimbadada ezitshatileyo zomtshato
utshate nini u melania
iingoma zomtshato zoomama noonyana
izithende zasebukhosini eziluhlaza emtshatweni
indlela yokuphelisa i-razor rash
umtshato ugcine umhla we-imeyile